Inona avy ny tombontsoa azontsika amin'ny teny frantsay?
2014-09-04 @ 08:22 in Kolontsaina
Rehefa mamaky ity lahatsoratra ao amin'ny Global Voices teny malagasy ity ianao dia ho tsikaritrao avy hatrany fa mitodika bebe kokoa amin'ny tombontsoa frantsay ilay mpanoratra. Tsy azo melohina izany fironana izany fa anjarantsika hafa rehetra kosa ny manontany tena hoe aiza ho aiza kosa ny tombontsoan'ny Malagasy rehefa miditra amin'itony fikambanana iraisampirenena tahaka ny OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) itony isika.
Ambaran'ny tatitry ny OIF tamin'ny taona 2010 hita ao amin'ny lahatsoratra fa amin'ny taona 2050 dia hosongonan'ny mpiteny frantsay (mahatratra 750 tapitrisa) ny isan'ny mpiteny anglisy. Fikambanana mpiaro ny teny frantsay kosa ve tsy hanatsara ny azy? Dia roboka daholo amin'izay ny orinasa frantsay manoloana izany tsena azo trandrahina tsara izany hanokana fandaharana ho an'i Afrika. Tsy misy resaka ho an'ny mpandraharaha Afrikana hatreto, fa somary mahatohina ihany ilay famaranana ny lahatsoratra hoe misy tombontsoa Afrikana ao amin'ny resaka fanofanan'asa sy ny tsenan'asa, natao ho mpiasa hatrany ve ilay Afrikana fa ny Frantsay no mpamorona asa?
Eritreritra tsy tana izany fa ilaina fantarina ihany izay voasoratry ny lahatsoratra. Mahatonga saina manko ny mahita resaka TNT amin'ny fomba ankolaka ao ka lasa manoratra tsy fidiny hoe nisy baiko avy any ambadika ve ilay mahamaika ny fitondrana malagasy hiditra amin'ity TNT ity.
Jentilisa 04 septambra 2014